Computer Technical Notes & Sharing Softwares: 2012
windows 8 မှာ မြန်မာဖောင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေသောသူမျာ...
windows 8 မှာ မြန်မာဖောင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေသောသူများအတွက်
ကျွန်တော့်တို့ အခုနောက်ပိုင်း Windows 8 Preview Version ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း အများစုက Windows 8 ကို စမ်းပြီး အသုံးပြုလာတာ တွေ့ရပါတယ်...။
ဒီနေရာလေးမှာ ဘာတွေပြဿနာကြုံ နေရလဲဆိုတော့ အခုအသစ် ထွက်လာတဲ့ Windows 8 မှာ Myanmar Text ဆိုပြီးတော့ Unicode ကို Support လုပ်ပေးထားပါတယ်...။
အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Unicode ကိုပဲ အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်တော့ ပြဿနာမရှိပါဘူး... ဒါပေမယ့် အများစုက ဇော်ဂျီဝမ်းကိုသာ အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာ Folder Rename ကို Zawgyi-one နဲ့ပေးထားလို့ Windows 8 မှာဖောင့်တွေ ပြောင်းပြန်တွေပေါ်နေတာတွေ G-talk ပြောတဲ့အခါ ပြန်မာလို့ ပေါ်ပေမယ့် ဖောင့်တွေက တစ်လွဲတွေဖြစ်နေတာကို ကျွန်တော့် Keymagic သုံးပြီး ဖြေရှင်းလို့ ရမယ့် နည်းလမ်းလေးကို ရေးပေးသွားပါမယ်...။
ကျွန်တော်တို့ Keymagic ကို သုံးနေတဲ့ သူတွေအတွက်က ပြဿနာမရှိပေမယ့် မသုံးဖူးသေးတဲ့ သူတွေအတွက် နည်းနည်း အခက်ခဲ ရှိနိုင်တာမို့လို့ ကျွန်တော် Keymagic အသုံးပြုနည်းလေးကိုပါ ရေးပေးပါ့မယ်...ဘာမှတော့ မခက်ပါဘူး...အရင်ဆုံး Windows 8 မှာ Keymagic အလုပ်လုပ်ပို့အတွက် Microsoft Visual C++2008 Redistributable Package ကို အရင် Install လုပ်ပေးပို့ လိုအပ်ပါတယ်...။
32 Bits Users တွေကတော့ ဒီအောက်က လင့်ခ်လေးမှာ ဒေါင်းလော့လုပ်လိုက်ပါ....။
!! ဆော့ပ်ဝဲလ်ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါ !!
64 Bits Users တွေကတော့ ဒီအောက်က လင့်ခ်လေးမှာ ဒေါင်းလော့ လုပ်လိုက်ပါ...။
Keymagic ကိုတော့ ဒီအောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းလော့ ယူလိုက်ပါ...။
အားလုံးကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပြီးရင် Microsoft က ဒေါင်းလော့လုပ်ထားတဲ့ Package လေးကို အရင် Install လုပ်လိုက်ပါ...ပြီးမှ Keymagic ကို Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ...ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွား ပါလိမ့်မယ်...ကျွန်တော် တစ်ချက်ပြောပို့ ကျန်ခဲ့တာက Zawgyi-One ဖောင့်ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း အရင် Windows7မှာတုန်းက အတိုင်းပါပဲ ဘာမှ မထူးပါဘူး...Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ..
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော့်တို့ Computer မှာ Myanmar Text Zawgyi-One နှစ်မျိုးစလုံး အသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြိး...Keymagic ကို အသုံးပြုရတာလွယ်ပါတယ်...ကျွန်တော်တို့ Zawgyi-One ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အရင် Windows7က အတိုင်း အသုံးပြုရုံပါပဲ...Keymagic နဲ့ Unicode Font ကို ပြောင်းသုံးချင်ရင်တော့ Keyboard မှ Shift +Ctrl +Z ကိုနှိပ်လိုက်ပါ...ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က keydoard မှ Zawgyi-One လက်ကွက်နဲ့ ရိုက်နေပေမယ့်လည်း စာလုံးတွေက Unicode ဖောင့်နဲ့ သူ့အလိုလိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်...Convert လုပ်ပေးတာပါ...ဒါဆိုရင်တော့ လက်ကွက်အတွက် အဆင်ပြေသွား ပြီးလို့ ထင်ပါတယ်ဗျ....။
ကျွန်တော်တို့ Folder တွေမှာ မြန်မာလို Zawgyi-One ဖောင့်နဲ့ မပေါ်တော့တာတွေအတွက် အရင် Windows7တုန်းကလို Font ကို သွားချိန်းပေးလို့မရပါဘူး...အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမှာတစ်ခုက Zawgyi-One ဖောင့်နဲ့ Rename ပေးထားတာတွေကို Keymagic သုံးပြီး Myanmar Text နဲ့ပြန်ပြီး Rename ပေးမှသာ Folder တွေမှာ မြန်မာဖောင့် ပေါ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်...
နောက်တစ်ချက်ကတော့ G-Talk သုံးတဲ့အခါမှာ မြန်မာလိုပေါ်သော်လည်း Font တွေက ထုံးစံအတိုင်း တလွဲတွေပေါ်နေပါလိမ့်မယ်...အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့က Gtalk က Setting ထဲမှာ Zawgyi-One ဖောင့်ကို သွားပြီး ပြောင်းပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်
Posted by SLIP at 6:49 AM0comments
Labels: Font, windows 8
Sophos' Naked Security ကုမ္ပဏီ၏ သတိပေးချက်အရ Facebook မှ ပေးပို့သော အီးမေးလ်အတုအယောင် ဖန်တီးပေးပို့မှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ မိမိ၏ Facebook သူငယ်ချင်းတစ်ဦးဦးက မိမိပါဝင်သော ဓာတ်ပုံသစ်တစ်ပုံကို အယ်လ်ဘမ်တွင် ထည့်သွင်းလိုက်ကြောင်း ရေးသားထားပြီး အဆိုပါဓာတ်ပုံအား ကြည့်ရှုရန် "View photo with you in the attachment" ဟူသည့် tab တစ်ခုပါရှိမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် အဆိုပါ attachment တွင် အမှန်တစ်ကယ်အားဖြင့် ကွန်ပျူတာစနစ်အား တိုက်ခိုက်နိုင်သည့် Trojan Horse ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစား ပါဝင်လာပြီး မိမိ၏ ကွန်ပျူတာသို့ ကူးစက်ဝင်ရောက်သွားနိုင်ကြောင်း Naked Security က သတိပေးထားသည်။
Facebook မှ ပေးပို့သော အီးမေးလ်အတုအယောင်ပုံစံတွင် အောက်ဖော်ပြပါစာသားများ ပါဝင်ပြီး ပုံတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by SLIP at 2:05 PM0comments
Posted by SLIP at 12:37 PM0comments
အောက်တိုဘာလကုန်တွင် Windows 8 ကို အပြီးသတ်ထုတ်လုပ်မည်ဟု Microsoft ကကြေညာခဲ့
ပြီးဖြစ်ရာ Windows 8ထွက်ပေါ်လာမည့် ကာလသည် မဝေးတော့ပြီ။ Windows Vista ထွက်လာ ပြီးသည့်နောက်တွင် ပြဿနာပေါင်းစုံထွေပြားမှုကြောင့် OS အသစ်သုံးသူတို့သည် Windows XP သို့နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး အသုံးပြုခဲ့ကြရသည်။
Windows7ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါတွင်လည်း ထိုသံသယက မကုန်စင်သေး။ ထို့ကြောင့် ယနေ့အချိန်ထိတိုင် Windows XP သုံးသူနှင့် ၇ သုံးသူအရေအတွက်သည် အတူနီးပါးရှိနေသည်။
သို့သော် Windows7က သုံးစွဲရာ၌အဆင်ပြေပါသည်။ အလုပ်လုပ်ရာ၌လည်း ပို၍လျှင်မြန်သည်။
နောင်ထွက်လာမည့် Windows 8 က ပို၍ပင်လျှင်မြန်လာပါဦးမည်။
Windows 8သည် Windows7လို Vista အစပ်အခြေပြုပြီး ပြင်ဆင်ထားသော OS မဟုတ်ပါ။ အစအဆုံး ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် ရေးဆွဲထားသော OS ဖြစ်ပါသည်။
Windows 8 သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသင့်သလားဟုမေးလျှင် သုံးသင့်သည်ဟုဖြေပါမည်။ Windows 8 သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသင့်သော အကြောင်းရင်းခံတို့ကိုကြည့်လျှင် အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါမည်။
Touch screen ကို အထောက်အပံ့ပြုသော Windows 8
Windows 8၏ အဓိကအပြောင်းအလဲကိုကြည့်လျှင် user interface ၌ပင် စ၍တွေ့ရပါသည်။
စက်ကိုဖွင့်သည့်အခါ စတွေ့ရမည့် Metro interface သည်ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြစ်ပြီး touch ဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင် အောင် အထူးရေးဆွဲထားပါသည်။
Windows7သည်လည်း Touch များခေတ်မစားသေးသလို Tablet ပေါ်တွင် OS အလုပ်လုပ်နိုင်မည့် အရေးကိုလည်း မစဉ်းစားခဲ့ပါ။
ထို့ကြောင့် ထိုစဉ်ကထွက်ရှိခဲ့သော All-in-on PC များဖြင့်သာ အသုံးပြုခဲ့ကြရသည်။
Touch ကြီးစိုးရာနယ်မြေသည် Tablet နှင့် Smart phone များဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် Windows 8ထုတ်လုပ်မည်ဟုဆိုသည့်အခါ Touch ကြီးစိုးရာ ပစ္စည်းများပေါ်၌ အလွယ်တကူသုံးစွဲနိုင်ရေးကို စဉ်းစားလာရပါသည်။
Touch သုံးစွဲနိုင်သည့် ပစ္စည်းမရှိသေးသူဖြစ်ပါက Windows 8ကိုဝယ်ယူရင်း Hardware အသစ်ဝယ်ယူရေးကို စဉ်းစားကောင်း စဉ်းစားရပါမည်။
သို့သော် OS အသစ်သည် သမာရိုးကျ Keyboard နှင့် Mouse ကို အထောက်အပံ့ပြုမည်ဖြစ်ရာ ကွန်ပျူတာအဟောင်းသုံးသူများ ပစ္စည်းအသစ်မ၀ယ်ဘဲ အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။
Touch Screen ပါသည့် Tablet သုံးသူများအနေဖြင့်လည်း Keyboard နှင့် Mouse ၏ပံ့ပိုးမှုကိုပါ တွဲဖက်ရရှိမည်ဖြစ်ရာ ကွန်ပျူတာသုံးစွဲမှုတွင် ပို၍ပြည့်စုံလာစရာ အကြောင်းရှိပါသည်။
Metro user interface ဖြင့် လာမည့် Windows 8
Metro user interface သည် Windows 8 အတွက် အသစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပေးထားသော
Windwos Phone7သုံးစွဲသူတို့အနေဖြင့်မူ ဤ interface ဖြင့် ယဉ်ပါးပြီး ဖြစ်ကောင်းဖြစ် နိုင်ပါသည်။
Windows 8 အသုံးပြုသူသည် ကွန်ပျူတာဖွင့်လိုက်သည့်အခါ ယခင်ကလို Windows Logoဖြင့် Start button ကို တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။
Live tile ဟုခေါ်သော အကွက်ငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားသည့် လေးထောင့်ကွက်ကြီးကို တွေ့ရပါမည်။
Live tile အကွက်ငယ်များတွင် ပြထားသော icon များသည် Desktop ပေါ်ရှိ icon များကဲ့သို့ပင်
အဆိုပါ နေရာမှနေ၍ သက်ဆိုင်ရာ Application ကို တိုက်ရိုက်ဖွင့်နိုင်ပါသည်။
သို့သော် Live tile က desktop icon ထက်အားသာချက်မှာ ယင်းကိုဖွင့်ကြည့်ရန်မလိုဘဲ mouse
ဖြတ်တင်ရုံဖြင့် Information ရနိုင်သည့်ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားမည်ဟုဆိုလျှင် mail application ပေါ် mouse ဖြတ်တင်ပါက အီးမေးလ်အသစ် မည်မျှဝင်နေသည် မည်သူ့ထံမှလာသည် စသည်တို့ကို သိနိုင်ပါသည်။
မိုးလေ၀သအခြေအနေဆိုလျှင်လည်း အင်တာနက်ချိတ်ထားပါက သက်ဆိုင်ရာ Live tile သည်လက်ရှိအခြေအနေကို ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
ယင်း Interface သည် နားလည်ရလွယ်သလို အသုံးပြုရလည်း လွယ်ပါသည်။
Touch screen ဖြင့် ပို၍အဆင်ပြေပါသည်။
သို့သော် mouse ဖြင့်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။
Touch ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ mouse ဖြင့်ဖြစ်စေ close application, access menu အပါအ၀င် လုပ်ငန်းပေါင်း
Application store ကို ခေါ်ဆောင်လာမည့် Windows 8
သာမန်သုံးစွဲသူတို့အတွက် Windwos 8သည် Windows RT (Windows Run Time) နှင့် Windows Pro ဟူ၍ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲ၍ ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းအပေါ်မူတည်၍ Application သုံးစွဲပုံ၊ သုံးစွဲနည်းကွဲပြားသွားပါသည်။ RT သည် ယခင် Desktop application အဟောင်းများကိုမူ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးလိုက်မည်ဖြစ်၍သာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် RT သုံးစွဲသူတို့သည် အသစ်ပေါ်ပေါက်လာမည့် Windows Store မှနေ၍ application အဟောင်းများကို ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
သို့သော် Metro Interface တွင် ထည့်၍သုံးစွဲလိုသည့် application များကို store မှနေ၍ ၀ယ်ယူ
ကွန်ပျူတာပေါ်မှနေ၍ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပြီး Windows store မှ application များကို browse လုပ်နိုင်သည်။ Download လုပ်နိုင်သည် Install တင်နိုင်သည်။
လောလောဆယ် Application အရေအတွက် အကန့်အသတ်ရှိနေသော်လည်း Windows 8 အပြီးသတ်ထွက်သည့်အခါ အရေအတွက်များပြားလာပါမည်။
Application အများစု (ဥပမာ - Maps) သည် full screen ဖြင့် ကြည့်နိုင်ပါမည်။
နေရာဒေသတစ်ခုကိုရှာရန်၊ တစ်နရာသို့သွားနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းရှာရန် ကိစ္စတို့အတွက် Big Map ကိုအသုံးပြုပါသည်။
သို့သော် Windows 8RT တွင်ရော Pro တွင်ပါ People, Calendar, Photo, Music, Messaging နှင့် Video ဟူသော Metro application များအသင့်ပါလာပါမည်။
Cloud service ကို အထောက်အပံ့ပေးမည့် Windows 8
Windows 8 သည် Cloud ကိုအသုံးပြုရန်လည်း ဦးတည်ချက်ထားသည်။
ယင်းသည်လူအများနှစ်ခြိုက်မည့် feature တစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားမည်ဟုဆိုလျှင် Microsoft Store သည် ကွန်ပျူတာသုံးစွဲသူ၏ setting များကို Cloud ထဲတွင် သိမ်းဆည်းပေးပါမည်။
ထို့ကြောင့် အင်တာနက်ချိတ်ထားသော Windows 8 ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်သုံးသည့်အခါယခင်က
မြင်တွေ့သည့် အတိုင်း လုပ်နေကျအတိုင်း ရှိပါလိမ့်မည်။
Cloud ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးမည့် Microsoft ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် Gmail ထဲမှနေ၍ အသုံးပြုသူ၏အီးမေးလ်များကို ဆွဲယူပေးခြင်း၊ facebook ပေါ်တင်ထားသမျှ ဓာတ်ပုံအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းမှ ကြည့်ရှုနိုင်စေခြင်း စသည်တို့ပါဝင်လာပါမည်။
Screen ကို Lock ချနိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံဖြင့် Password ပေးနိုင်မည့် Windows 8
စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူတို့အတွက်မူ lock screen ကို အသားကျပြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။
ဖုန်းသုံးလိုလျှင် lock ကိုဖြည်ပေးရမည်။ Password သုံးပြီး lock လုပ်ထားလျှင် password ဖြည့်ထည့်ပေးဖို့လည်း လိုပါမည်။
Windows 8တွင်လည်း စမတ်ဖုန်းမှာကဲ့သို့ picture lock screen ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
Lock ကိုဖြည့်ရန်အတွက် လက်ရွှေ့လျားမှုပုံစံသုံးမျိုးကို လုပ်ရန်လိုပါသည်။
အဆိုပါရွေ့လျားမှုတို့ကို straight lines, circles နှင့် taps များထဲမှ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
Lock screen ကိုလည်း မိမိ၏ ဓာတ်ပုံ၊ အချိန်၊ နာရီ၊ ရက်စွဲ၊ application notification စသည့် အရာတစ်ခုခုဖြင့် စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးအစား စုံလင်စွာအသုံးပြုနိုင်စေမည့် Windows 8
Windows 8ကို PC ပေါ်တွင်သာမဟုတ် အခြားသော ပစ္စည်းအတော်များများပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်လည်း ဒီဇိုင်းဆွဲထားပါသည်။
(၂၇) လက်မမြင်ကွင်းရှိသော PC ဖြစ်စေ၊ (၁၅) လက်မမြင်ကွင်းရှိသော Notebook ဖြစ်စေ၊ (၁၀) လက်မမြင်ကွင်းရှိသော Tablet ဖြစ်စေ Windows 8သည် အမှားအယွင်းမရှိ အလုပ်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Metro interface သည် ပုံဖော်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့် resolution အမျိုးမျိုးပေါ်တွင် အဆင်ပြေစွာ ချိန်ညှိလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပါသည်။
ကွန်ပျူတာအကြီးအသေးပေါင်းစုံပေါ်တွင် တသမတ်တည်ငြိမ်မှုဖြင့် အလုပ်လုပ်လိုသည်ဟုဆိုလျှင် Windows 8သည် အလွန်တရာ ရွေးချယ်သင့်သော အရာဖြစ်ပါသည်။
ဆော့ဖ်ဝဲအဟောင်းများနှင့် တွဲ၍သုံးနိုင်စေမည့် Windows 8
OS တစ်ခု၏ အသွင်အပြင်နှင့် တည်ဆောက်ပုံသည် အလွန်တရာပြောင်းလဲသွားသည့်အခါ ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သော ဆော့ဖ်ဝဲအဟောင်းများနှင့်တွဲဖက်၍ ရမှရပါတော့မည်လားဟု စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိလာပါသည်။
Windows Vista ထွက်သည့်အခါ XP နှင့်တွဲသုံးနိုင်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲအချို့ အလဟသဖြစ်ခဲ့ရသည် မဟုတ်ပါလား။
သို့သော် ဤတစ်ကြိမ်တွင် ကံကောင်းသည်မှာ Windows7တွင် တွဲဖက်သုံးနိုင်သော application အားလုံး Windows 8တွင် သုံး၍ရမည့်ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။
Microsoft သည် Metro interface ကိုပွဲထုတ်ခဲ့သော်လည်း ယင်း၏အောက်တွင် ယခင်မြင်တွေ့နေကျ desktop ရှိနေပြီး ယခင် application အဟောင်းများကို (Install တင်ထားခဲ့လျှင်) ခေါ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါမည်။
Windows 8RT ကမူ Metro application များကို သီးခြားဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါမည်။
Pro တွင်မူ application အဟောင်းများကို တင်၍သုံးနိုင်သလို Metro application အသစ်များကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူအနေဖြင့် Application နယ်ပယ်နှစ်မျိုးလုံးကို တဖြည်းဖြည်းယဉ်ပါးသွားပါလိမ့်မည်။
Task and file management အသစ်ကို ယူဆောင်လာမည့် Windows 8
Windows 8တွင် Task နှင့် file များ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အလှည့်အပြောင်းလုပ်နိုင်မည့် ကိစ္စအချို့ပါဝင်လာပါသည်။
Multiple file operation တို့ကို Windows တစ်ခုတည်းတွင် ခိုင်းစေနိုင်ပါမည်။ ဖိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုစီကိုခွဲ၍ pause နှင့် cancel လုပ်နိုင်ခွင့်ရှိပါမည်။
file လွှဲပြောင်းမှု အမြန်နှုန်းကိုဖော်ပြပေးမည့် real-time graph တစ်ခုလည်း ပါဝင်လာပါမည်။
Task management အတွက်မူ application နှင့် background process ဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီး အလုပ်လုပ်ပါမည်။
Application History ဟုခေါ်သော အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီး အလုပ်လုပ်ပါမည်။
Application History ဟုခေါ်သော Tab အသစ်တစ်ခုလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။
ယင်းထဲတွင် Metred Network section ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့် Application က data အများစုအား ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ရေးသားသူ -ဧဧသက် (ဖြိုးဓန ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓါတ်ပုံ)
Posted by SLIP at 10:00 AM 1 comments
Gmail, Email စာတွေဓာတ်ပုံတွေကို ပတ်စဝေါ့နဲ့ပိတ်ထားပြီးတခြားလူကြည့်မရအောင်ပိတ်မည်..
နိုင်ငံခြားမှာတေ့ာ အရေးကြီးတဲ့ ဘဏ်အကောက်တွေ နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့
သက်ဆိုင်တဲ့လျို့ဝှက်သတင်းတွေကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပို့တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုကြရတယ်
http://www.lockbin.com/lockbin.php လိပ်စာသို့သွားပါ..Your name မှာ မိမိနာမည်ကိုရိုက်ထည့်မည်...
Your Email မှာ မိမိ အီးမေ်းလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်မည်..
Recipient email မှာတော့ ကိုပို့လိုတဲ့လူရဲ့အီးမေးလိပ်စာကိုရိုက်မည်.
Secret password မှာ မိမိသတ်မှတ်လို့တဲ့ လျို့ဝှက်ဂဏန်းကိုရိုက်ထည့်မည်.
Confirm password မှာ secret password မှာရိုက်ထားတဲ့ လျို့ဝှက်ဂဏန်းကိုရိုက်ထည့်မည်.
subject မှာ မိမိပို့မယ့်အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ကိုရိုက်မည်..
message box မှာပြောလိုတာကိုရိုက်ပြီး
photo သို့မဟုတ် သီချင်း ပါတွဲပို့လိုလျှင် upload ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ်အဲနောက်
i accept the term and condition ကိုအမှန်ခြစ်လေးပေးပြီး submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
Posted by SLIP at 10:01 AM0comments
Posted by SLIP at 2:21 AM2comments
ကဲ.....ဒီတစ်ခါတော့ တေးသီငှက် ချစ်ပိရိသတ်အတွက် ဆော့ပ်ဝဲလ်တစ်ခုကို တစ်ကယ်စမ်းသပ်အောင်မြင်လို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Micros SD Card 1 GB ကနေ2GB ပြောင်းလို့ ရတယ်ဆော့်ဝဲလေးပါ။လုပ်ရတာခက်ခဲတာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။အရမ်းကိုလွယ်ကူပါတယ်။
လုပ်နည်းက Driver နာမည်ကိုရွေးပေးပါ။ပြီးရင်တော့Convert ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်ကဒ်ကိုကွန်ပျူတာထဲကနေအပြီးဖြုတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ပြန်တပ်လိုက်ပါက1 GB မှ2GB ပြောင်းသွားမှာကိုတွေ့ ၇မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆော့ပ်ဝဲလ်ဒေါင်းရန် -------------> ဤနေရာကိုနှိပ်၍ ဆော့ပ်ဝဲလ်ရယူပါ.........!
Posted by SLIP at 9:58 AM0comments